Izilwanyana ezingenamqolo kwi-aquarium | Ngeentlanzi
Los izilwanyana ezingenamqolo ezinokubandakanywa kwi-aquarium apho banokuhlala khona nentlanzi, zezi iinkumba, ii-camerones kunye ne-crustaceans, Phakathi kwezinye, ewe, iintlanzi ezihambelanayo kwaye azingomthombo wokutya kubo, ngakumbi ezo ntlanzi zinkulu zinokutya okutyisayo okanye ukutya.
Uninzi lwee-invertebrates zamanzi zifuna isixa esithile seetyuwa ezichithakeleyo ukubanceda indalo kunye nokugcinwa kwamaqokobhe abo ukuze zingagqabhuki kwaye ziphele zibangela ukufa, kungoko zifuna amanzi anealkali yobulukhuni obuphakathi kuba zezona zilungileyo zokuqinisekisa ulondolozo olufanelekileyo.
Nangona uninzi lunemvelaphi yetropiki, amaqondo obushushu aphezulu kakhulu akhawulezisa inqanaba lokucolwa kwemetabolism yakho kwaye ke kunciphisa ubude bayo. Amaqondo obushushu aphakathi kwama-23 kunye nama-27º C angalungela phantse zonke. Ngamaqondo obushushu angaphantsi kwe-18º C bagcina imiqondiso yabo ebalulekileyo kodwa ngaphantsi kobushushu baya kungena kwinqanaba lokudinwa.
Uninzi lweentlobo lubuthathaka kubukho beemixube ze-nitrogen, kubandakanya ne-nitrite esezantsi. Zihlala ziqhelekile uvakalelo kumayeza ngakumbi ezo zibandakanya ubhedu phakathi kwezinto zalo, ke ngoko kufuneka silumke xa kufuneka sicoce amanzi.
Ku malunga Iintloni kunye nohlobo lokuziphatha ngokuhlwa. Umsebenzi wayo ophezulu wenziwa emini. Ngexesha lokuphumla zigcinwa zifihliwe kumakhaya abo okhuselo okanye emva kokukhuselwa kwamagqabi ezityalo. Ukufakela ukukhanya kwenyanga kumaxesha obumnyama kuya kusinceda sizixabise izinto oqhele ukuzula kuzo ujikeleze i-aquarium.
Los isineyile, ezinye ezahlukileyo, zibaxiwe esiba sisibetho xa singalawulwa kakuhle. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuthatha amanyathelo okhuseleko kuba le ngozi ayichaphazeli i-aquarium kuphela, kodwa i-ecosystem yonke yaselwandle, ithatha ingxaki enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Izilwanyana ezingenamqolo kwi-aquarium